I-Sítio Macaúbas do Moinho, ucezu oluncane lwe-Chapada.
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Flavio
Indawo etholakala e-Povoado do Moinho, idolobhana elincane eli-12km ukusuka e-Alto Paraíso. Le ndawo isendaweni egcwele imifula, imizila nezimpophoma. Okukhangayo okuyinhloko ukusondela kwemvelo nezimpophoma, njenge: Izingelosi neziNgelosi ezinkulu. Indlu igcwele imihlobiso yakudala, eletha umuzwa wokunethezeka, ilandela iphethini ye-rustic.
Isikhala ngokungangabazeki siyisici esiyinhloko sendlu, sivulekile futhi sinezigaba eziningana, okuvumela wonke umuntu ukuba ahlaliswe ngendlela engcono kakhulu. Ebusuku obubandayo, kunesitofu sezinkuni, esihle kakhulu ukulungiselela ukudla ezimbizeni zamatshe ezinikezwayo. Ngemva kosuku ezimpophomeni, akukho lutho olungcono kunokunethezeka kwekhaya.
4.43(14 okushiwo abanye)
4.43 · 14 okushiwo abanye
IPovoado do Moinho iyidolobhana elidala elitholakala ku-12km ukusuka e-Alto Paraíso. Indawo - cishe - yaqalwa ngabakwaBandeirantes ababefuna igolide. Ekuqaleni, iSigayo sasiyi-Quilombo. Kusanda kufika ugesi kanye ne-inthanethi kulesi sifunda. Isici esiyinhloko sale ndawo ukuthi itholakala esifundeni esigcwele imifula nezimpophoma.